Agromart | Agricultural Marketplace Nepal अलमण्ड तथा मधेसी बदाम (Almond) को खेती आफैले गरी मनग्य आम्दानी लिन सकिने ! – Agromart
अलमण्ड तथा मधेसी बदाम (Almond) को खेती आफैले गरी मनग्य आम्दानी लिन सकिने !
नेपाली समाजले अलमण्डलाई सामान्यतया मधेसी बदाम/हाडे बदामको नामले चिन्दछ। यसलाई चिनिया बदाम पनि भन्ने गरिन्छ। मधेसी बदाम मध्यम खालको रुखमा फल्ने फल हो । मधेसी बदाम चेरी, आरु, आरुबखडा, खुर्पानीजस्ता बनस्पतिजस्तै फलजन्य बनस्पति हो। तर चेरी, आरु, आरुबखडाभन्दा पृथक मधेसी बदामको चाहि गेडा मात्र उपयोग गरिन्छ बाहिरी आवरण प्रयोग गरिदैन। यसको पात करिब करिब आरुको जस्तै गाढा हरियो र हल्का लाम्चो आकार हुन्छ। यी दुबैको बंश पनि एउटै हो । यसका फूलहरू सेतोमा रातो रंग मिसिएका हुन्छन् र झुन्डिएर फुल्छन् । फलहरू भने दुई भागमा विभाजित मखमली दाना भएका र कडा खोलयुक्त हुन्छन् । यसैभित्रको गुदीलाई मधेसी बदाम भनिन्छ । यही गुदी र गुदीबाट आउने तेललाई विभिन्न औषधीय प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याइन्छ ।
मधेसी बदाममा फाइबरको मात्रा हुन्छ र भिटामिन इ, म्याग्नेसियम,सिलिनियम, क्यालसियमजस्ता मिनरलको मात्रा प्रचुर हुन्छ। बदामको गुदीमा पेट सफा राख्ने, पिसाब खुलाउने, शरीरलाई पोषण दिने, दुखाइ कम गर्ने, शरीरको भित्री भाग सुन्निएर वा चिलाएर दुखेको भए त्यसलाई निको पार्ने, नसाहरूलाई सक्रिय राख्ने क्षमता रहेको हुन्छ । आर्युवेदमा दिनहु २ ओटा मधेसी बदाम खानेलाई कुनै पनि आखाको समस्या नहुने जनाइएको छ तथा आखाको क्षमतालाई महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउछ। बदामको तेल मीठो र शीतलता प्रदान गर्ने खालको हुनुको साथै यसमा मांसपेशीहरूलाई बाउँडिनबाट बचाउने क्षमता हुन्छ । बदामलाई सिधै खानुको साथै चकलेट, केक, तेल, औषधि बनाएर पनि उपभोग गरिन्छ।
नेपालको भौगोलिक परिवेश मधेसी बदाम खेतीलाई अत्याधिक उपयुक्त मानिन्छ। यहा ६०० मिटर भन्दा माथि करिब ३५०० मिटरसम्मका पाखाबारीमा समेत मधेसी बदाम खेती गर्न सकिन्छ। यी उचाई अन्तर्गतका क्षेत्रमा परम्परागत खेती अन्तर्गत नेपालमा हालसम्म खासै आम्दानी लिन सकिएको छैन। तराइको बाजो जमिन तथा पहाडि क्षेत्रका यस्ता प्रयोगहिन पाखाबारीहरुमा मधेसी बदाम लगाएर नेपाललाई मधेसी बदामको उधोगको रुपमा बिकास गर्न सकिन्छ। यो खेतीलाई सामुदायिक वनमा जंगली प्रविधिबाट खेती गरेर पनि आम्दानी लिन सकिन्छ।
आरु प्रजातिको यो बनस्पति सम्पूर्ण रुपमा आरुजस्तै देखिन्छ। बिश्वभरी आरु पाइने क्षेत्रमा यसको खेती गरिदै आएको छ। मधेसी बदामलाई आरुको र दभततभच मधेसी बदामको बोटमा कलमी पनि गरिन्छ। तर कलमी बाट बनाइएको कलमी गरीएको युनियनमा बिभिन्न समस्या आउने गरेकोले यसलाई सिधै बिरुवाबाट खेती गरीन्छ। बीउ बाट बनाइएको बिरुवाबाट मधेसी बदाम खेती गरिदैन टिस्युकल्चर गरेर बनाइएको बिरुवाबाट खेती गरिन्छ। आरु जस्तै हलक्क बढ्ने मधेसी बदामको भारतिय कागजी र अमेरिकन एच डि वान अन्तर्गतको शालिमार भेराइटी विश्वप्रसिद्ध मानिन्छ।
मधेसी बदाम फल्न शुरु भएपछि १५-३० बर्षसम्म निरन्तर यसले उत्पादन ( ५ – ३० के जि) दिन्छ। यसको बोट १० देखि २० फुटसम्म अग्लो हुन्छ तर यसलाई कटिङ गरेर सानो बनाउन पनि सकिन्छ। अमेरिकाजस्ता देशहरुमा सामान्यतया यसलाइ फागुन चैतमा खेती गरिने भए पनि नेपालजस्ता देशहरुमा पतझड जातको बनस्पति भएको कारण जाडो महिना (पौष, माघ,फागुन ) सबैभन्दा उपयुक्त मानिए पनि पानिको संभावना भएको ठाउमा सबै महिनामा यसको खेती गर्न सकिन्छ भने पानीको कम संभावना भएको ठाउमा बर्षायाम उपयुक्त हुन्छ। यसको उत्पादन अगस्त सेप्टेम्बरमा लिने गरिन्छ र बजारमा लैजाने काम अक्टोबर नोबेम्बरपछि गरिन्छ। फलजन्य बालीभए पनि मधेसी बदाम ड्राइ फल भएकोले बिग्रने डर हुदैन आफूलाई अनुकुल समयमा बजारमा लैजान सकिन्छ।
आरु फल्ने ठाउँमा प्राय यसको खेती गर्न सकिन्छ
अलमण्ड (Almond) बिरुवाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् :